Muxuu Midowga Yurub ka yiri heshiiskii doorashada? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu Midowga Yurub ka yiri heshiiskii doorashada?
Midowga Yurub ayaa war ka soo saaray heshiiska doorashada ee shalay ay Dowladda Soomaaliya iyo Dowladaha xubnaha ka ah Fadaraalka ku saxiixeen magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – War ka soo baxay Madaxweyne ku xigeynya Midowga Yurub Josep Borrell, ayaa lagu taageeray heshiiskii laga gaaray khilaafkii doorashooyinka Soomaaliya ee soo taagnaa muddada Sideedda billod ah.
“Guushii ay ku soo dhanaadeen wadahadalladii u dhaxeeyay madaxda DFS iyo Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka intii lagu guda jiray kalamadoodii dhacay 20-27 May waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday qabsoomidda doorashooyin nabadeed oo waafaqsan heshiiskii Sebtember 17”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Midowga Yurub.
Waxa ay sooo dhaweeyeen dadaallada uu wado Ra'iisul Wasaare Rooble, wadatashiyada wax ku oolka ah ee u dhexeeya hoggaanka Federaalka iyo Maamul goboleedyada, waxayna tilmaaameen in Doorashooyinka lagu qabto xilligii loo qorsheeyay.
Waxa ay ku baaqeen in la sii wado tallaabooyinka xiga ee geeddi-socodka, dhammaan dhinacyada ay kula taliyeen in ay ka fogaadaan rabshadaha ama tallaabooyinka wax u dhimaya geeddi-socodka.